Marvel Comics 3.10.12.310385 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.10.12.310385 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား ႐ုပ္ျပမ်ား Marvel Comics
Marvel Comics ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးစူပါသူရဲကောင်းများ featuring က Android ပေါ်မှာ Marvell Comic app ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း! ခလုတ်များထိတွေ့နှင့်အတူသင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် tablet ပေါ် - Iron Man, Thor, Captain America, Spider-Man, Wolverine နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင် - သင့်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင် featuring ရုပ်ပြစာအုပ်တွေရာပေါင်းများစွာ download လုပ်ပါ။ သင်သည်သင်၏ပဲ့ထိန်းအမြင် (အကာတွန်းကတဆင့်ကာတွန်း, panel ကို-by-panel ကိုလမ်းကြောင်းကို) ၏ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်၏စာမျက်နှာများမှတဆင့်သင့်ရဲ့လမ်း zoom နဲ့ pan ပုံမှန် device ကိုထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြု. အသုံးပြုပုံဘယ်တော့မှမမီတူသော်လည်းအံ့ဩရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးစီးရီးများနှင့်ပုံပြင်များခံစားရပါလိမ့်မယ် ဇာတ်လမ်းနဲ့အံ့သြဖွယ်အနုပညာလက်ရာများ!
သင့်ရဲ့ downloads, အသီးအသီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏ Marvel.Com အကောင့်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင့်ရဲ့ device ကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်လာမယ့်အချိန်သင်သည်သင်၏ရုပ်ပြနောက်တဖန်အဖတ်ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုလိမ့်မည်!
ယုံကြည်မဟုတ်လော ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်သော downloads, ထွက်စစ်ဆေး! အချိန်မရွေး & ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်နှင့်အတူအံ့ဩခြင်းဠာ Take!
+ ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးစူပါသူရဲကောင်းများ featuring 13.500 ကျော်ရုပ်ပြမှ Access!
+ ဒေါင်းလုတ်အခမဲ့ရုပ်ပြ, updated အပတ်စဉ်ထုတ်!
+ စိတ်ကြိုက်စာဖတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကို - panel ကိုမှ panel ကိုအကြားအပြည့်အဝစာမျက်နှာ display ကိုရွေးကောက်သဖြင့်, ပိုပြီး!
Marvel Comics အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Marvel Comics အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Marvel Comics အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Marvel Comics အား အခ်က္ျပပါ
rootmods စတိုး 549 335.74k
Marvel Comics ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Marvel Comics အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.10.12.310385
ထုတ်လုပ်သူ Marvel Comics
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://disneyprivacycenter.com/
လက်မှတ် SHA1: F6:61:20:49:C5:ED:95:DC:9C:91:16:98:F4:49:3C:17:0D:60:0A:52
ထုတ်လုပ်သူ (CN): David Steinberger
အဖွဲ့အစည်း (O): "Iconology
Marvel Comics APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ